Dhoolawaa: “Shidaal Soomaaliyeed la xaraashi mayo ee xogaha Spectrum baa la kala gadanayaa” (dhegayso|daawo) – Radio Daljir
Dhoolawaa: “Shidaal Soomaaliyeed la xaraashi mayo ee xogaha Spectrum baa la kala gadanayaa” (dhegayso|daawo)
Febraayo 7, 2019 3:20 g 1
Agaasimhii hore hay’adda macdanta iyo shidaalka ee Puntland Ciise Maxamuud Faarax Dhoolowaa ayaa waraysi dheer uu siiyay radio Daljir waxaa uu ku faahfaahiyay shirka London ee lagu jahwareersanyahay ee arrimaha shidaalka, natiijadii baaritaanadii shidaal ee Puntland ee ceelka Shabeel 1 iyo Shabeel 2 iyo xogaha la xiriira in shidaal uu ku jiro Soomaaliya.
Ciise oo isagoo ku sugan magaalada Melbourne ee Australia la hadlayay Radio Daljir ayaa marka hore sheegay dowladda faderaalka inay ku degdegtay shirkan London oo ay soo qabanqaabiyeen shirkado shidaalka baara.
Waxaa uu ku tilmaamay inaanay waxba ka jirin wararka sheegaya in shidaalka Soomaaliya lagu iibinayo, waxaana uu sheegay shirkan kaliya inuu ujeedkiisa uu yahay in lagu soo bandhigo xog kusaabsan shidaal baaris horay ay shirkadda ay ku samaysay Soomaaliya, taasi oo ay heshiis la gashay dowladdii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Ciise ayaa tilmaamay inuu la yaabanyahay sababta hadda ay mudaharaad ay uga muujinayaan shirkan, qaar ka mid ah wasiiradii xukuumaddii Xasan Sheekh ee shirkaddan baaritaankeeda u siiyay ogolaashiyaha, isagoona sheegay xusay dowladda Puntland baaritaanadii hore ee shirkadda ay ka hortimid maadaama uu sharci ahayn.
Puntland waxaa ay ahayd burburkii Soomaaliya kadib meeshii u horaysay ee shidaal baaris lagu sameeyo ama laga sameeyo isku day qoditaan, waxaana uu agaasimuhu sheegay natiijada soo baxday inay noqotay shidaal ganacsi kaliya kara inuu ku jirin.
Waxaa shirka Lonodon uu sheegay kaliya inuu yahay mid ku qotoma baaritaanadii shidaalka oo lasoo bandhigo, xogtaasi oo laga iibin doono shirkado kalle oo caalami ah, dhanka kallena waxaa uu xusay inuu jirin shidaal hadda Soomaaliya la ogaaday in lasoo karo ama iib uu geli karro kaliya waxa yaala uu yahay tuhun shidaal.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19866
Xaladda abareed ee Puntland oo laga qaylo dhameyey (Daawo)
Cabdi 1 year ago
Xogahu miyaanay shidaalka ahayn, sheeko caruureed weeye waxay kaloo la mid tahay itobiya iyo soomaaliyaa laysku darayaa mayee laysku dari maayee waynu midoobaynaa,bada shiinahaanu ku wareejinay, kumaanu wareejinay kaluunkiisa tebedintaanu ka gadnay ee wax kale lagama gadin